बिपन्नलाइ पौष्टिक आहार वितरण – Enayanepal.com
बिपन्नलाइ पौष्टिक आहार वितरण
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका १ नम्बर वडाका अति विपन्न परिवार लाई विषेश पोषण सप्लिमेन्ट प्याकेज वितरण गरिएको छ । वास्तविक आवश्यकतामा रहेका गर्भवती महिला, सुत्केरी महिला, स्तनपान गराउने आमा, पांच वर्षमुनिका बालबालिका र किशोरी गरि एक सय भन्दा बढीलाई खाद्य सामाग्रि वितरण गरिएको हो ।
पोषण प्याकेज अन्तर्गत पोलिस नगरेको चामल, अण्डा, गेडागुडी तथा क्वाँटी, शुद्ध तोरीको तेल वितरण गरिएको छ । यसैगरि हरियो तरकारी तथा सागपात, फलफुल, सर्वोत्तम पिठो, ज्वानो जस्ता खाद्य सामाग्री वितरण गरिएको वडा अध्यक्ष गंगाराम सुनारले बताए ।
पोषण सप्लिमेन्ट प्याकेज १ नं वडा कार्यालयमा वितरण भएको छ । भोर संस्थाको आर्थिक सहयोगमा पोषण सप्लिमेन्ट प्याकेज वितरण गरिएको अभियान्ता खुमलाल न्यौपानेले बताए । खाद्य सामाग्री वितरण कार्यक्रममा बरिष्ठ बालविशेषज्ञ डा. नवराज के.सी. ले पोषणयुक्त खानेकुराको सहि मिश्रणले मात्रै राम्रो नतिजा दिने बताए । उनले बालबालिका तथा गर्भवती महिला लाई खानेकुरा दैनिक रुपमा मिलाएर खाने तरिकाका बारेमा समेत जानकारी दिए ।
वास्तविक आवश्यकता रहेका व्यक्तीहरुको छनोट गर्नका लागि यसअघि जनप्रतिनिधि , वडा कार्यालयका कर्मचारी , स्थानीय क्लव र युवाहरुको टोलि परिचालन भएको थियो । बन्दाबन्दिका कारण पौष्टिक आहारको कमिले निम्त्याउने समस्यालाई कम गर्नका लागि बिशेष सप्लिमेन्ट खाद्य सामाग्री वितरण गरिएको अभियान्ता दिनेश खत्रीले वताए ।
पत्रकार तिलक पौडेल उक्त संस्थाका प्रदेश प्रतिनिधि हुन । उनका अनुसार एक लाख ६५ हजार भन्दा बढि मूल्यको पौष्टिक आहार वितरण गरिएको हो ।